Secure Folder 1.3.01.92 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.01.92 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား စီးပြားေရး Secure Folder
Secure Folder ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကိုဒီ update ကိုအန်းဒရွိုက် 7.0 နှင့်အထက်နှင့်အတူကို Samsung မိုဘိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သည်
လုံလုံခြုံခြုံ Folder ကိုသင့်ရဲ့က Samsung Galaxy ဖုန်းပေါ်မှာပုဂ္ဂလိကစာဝှက်ထားတဲ့အာကာသဖန်တီးရန်ကာကွယ်ရေး-grade ကို Samsung က Knox လုံခြုံရေးပလက်ဖောင်း leverages ။ Apps နှင့်ဒေတာများ device ကိုအပေါ်သီးခြားစီ sandboxed နဲ့လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်းအလွှာရရှိနေကြသည် Folder ကို Secure သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဖိုင်တွေနဲ့ app များကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထား။ ဒါဟာလုံခြုံတဲ့ Folder ကိုအတွင်းပိုင်းကနေ "files တွေကို Add" မှတဆင့်သူတို့ကိုတင်သွင်းနေဖြင့်သို့မဟုတ် "Folder ကို Secure ရွှေ့ရန်" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် apps များနှင့်အချက်အလက်ရွှေ့ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သူတို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေကာကွယ်ပေးနေကြသည်ဒါကြောင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး apps များနှင့်အချက်အလက်ကွဲကွာနဲ့ encrypted လိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကပုံများ, app များနှင့်အချက်အလက် access လုပ်နိုင်မှသာသို့မှသာတစ်ဦးအပိုဆောင်း PIN နံပါတ်, ပုံစံ, စကားဝှက်, ဒါမှမဟုတ် biometric သော့ခတ်နှင့်သင်၏လုံလုံခြုံခြုံ Folder ကို Lock ။
လုံလုံခြုံခြုံ Folder ကိုသို့သင့်ရဲ့ apps များနှင့်အချက်အလက် Add သို့မဟုတ်ကူးယူပါ။ သငျသညျသီးခြားအကောင့်ထဲမှာသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအဆက်အသွယ်များ, ဓာတ်ပုံများ, နှင့်ပိုပြီးသိုလှောင်ရန်လုံလုံခြုံခြုံ Folder ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်သင်ပိုမိုထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ဒေတာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်ကိရိယာနှစ်ခု profile များကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
လုံလုံခြုံခြုံ Folder ကို※သာက Samsung Electronics ကဖြန့်ချိအရာရှိတဦးက software ကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ် UX ကို device ကို, OS ဗားရှင်း, စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေခြင်းငှါ
လုံလုံခြုံခြုံ Folder ကို※သင့်မိုဘိုင်း device ကိုအတွင်းလွတ်လပ်တဲ့, အထီးကျန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း Samsung ကအကောင့်ပေါ်တွင်အခြေခံတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ application များနှင့်ဒေတာများပြောင်းရွေ့သို့မဟုတ် Folder ကို (ဥပမာဓာတ်ပုံများ, အသံဖိုင်တွေ, ရုပ်ရှင်ဖိုင်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ) Secure မှဆက်ပြောသည် USB ဒါမှမဟုတ် Wi-Fi ကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဖြစ်စေ, ပြင်ပလုံခြုံတဲ့ Folder ကိုကနေလက်လှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင့်မိုဘိုင်း device ကိုမဆို root လုပ်ပေးတဲ့သို့မဟုတ် Custom ROM တွေကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်လြှငျ, လုံခြုံတဲ့ Folder ကိုအလိုအလျှောက် lock-up, ပါလိမ့်မယ်သင်တို့သည်နောက်တဖန်လုံခြုံတဲ့ Folder ကိုအတွင်း contents တွေကို access သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်, တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်။ ထို့ကြောင့်, Folder ကို Secure သူတို့ကိုရွေ့လျားမီ, ထိုကဲ့သို့သောသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဖြစ်, သင်တခြားနေရာမဆိုအရေးကြီးသော applications များသို့မဟုတ်ဒေတာကို back up သေချာအောင်ပေးပါ။ Samsung ကမည်သည့်ဒေတာများဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်လက်လှမ်းမမှီတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။
Backup ကိုသုံးပါနှင့်ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့ဖောက်သည် '' ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အောက်ကလမ်းကြောင်း၏ Restore ။
လုံလုံခြုံခြုံ Folder ကို> Setting> Backup ကိုနှင့် Back ကိုတက်> လုံခြုံတဲ့ Folder ကိုဒေတာ restore
- ပြက္ခဒိန်: ကို 'ဝေမျှမယ်ပြက္ခဒိန်' 'function ကိုထောက်ပံ့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်
- ဆက်သွယ်ရန်: လုံခြုံတဲ့ Folder ကိုဖွင့်လှစ်ရန်မှတ်ပုံတင်ထားသောအကောင့်ကို အသုံးပြု. ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်
- သိုလှောင်မှု: Backup လုပ်ဖို့နဲ့ Secure Folder ကိုဒါမှမဟုတ်ဖိုင်များကိုဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်မဖျက်ပစ်တဲ့အခါမှာ data တွေကို backup လုပ်ထားအင်္ဂါရပ်ပေး၏ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းအရာ restore ပြန်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်
- ခန္ဓာကိုယ်အာရုံခံကိရိယာ: လက်ဗွေရာနှင့်အတူသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပြီး၏ရည်ရွယ်ချက်သည်နှင့်မျက်ဝန်း
Secure Folder အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Secure Folder အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Secure Folder အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Secure Folder အား အခ်က္ျပပါ
ramschladen စတိုး 566 142.39k
Secure Folder ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Secure Folder အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.01.92
Secure Folder APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ